မြန်မာ့ပြည်တောင်များနိမ့်ဆင်းခြင်းနှင့် မြေပြင်မြင့်တက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » မြန်မာ့ပြည်တောင်များနိမ့်ဆင်းခြင်းနှင့် မြေပြင်မြင့်တက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များ
မြန်မာ့ပြည်တောင်များနိမ့်ဆင်းခြင်းနှင့် မြေပြင်မြင့်တက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များ
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Oct 25, 2011 in Environment, Know-How, DIY |4comments
.မြန်မာ့နိုင်ငံအရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အတွက်ဒီပိုစ့်ကိုလည်း..မိန်းပေခ်ျ့ ကနေဆွေးနွေးပါရစေ…
တကယ်လို့ သာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတိုင်းက နိုင်ငံရေးသမား၊တော်လှန်ရေးသမားတွေ မဟုတ်ကြမေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အရေးကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးပြဿနာ တွေကို ပြည်သူ့အင်အားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲယူနိုင်ကာ ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တခုဆီ ကို ပြည်သူ့အင်အားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား တွေအနည်းနဲ့အများဆိုသလို ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အရေးရေမြေတောတောင်ပြောင်းလဲမှူ.ဖြစ်တည်မှုတွေ ကို…ကျွန်နော်တို့ ဝိုင်းကူသိစေချင်ပါတယ်..။
နိုင်ငံရဲ့ တောတောင်ရေမြေပြောင်းလဲမှုတွေကို သိရှိနိုင်အောင် ဒီ ပိုစ်ကိုMMWကယေူပြီး တင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ရဲ့ သေးနုပ်တဲ့ ဥာဏ်နဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး….ဒါကြောင့်ဂေဇတ်ကခင်မင်လေးစားသောမိတ်ဆွေများပါ..သုတရစေရန်အလို့ ဌာကူးယူတင်ပေးပါတယ်..။
MMW Blog Mobile Link http://tinyurl.com/6h4nyso
တောင်တွင်းကြီးမြို့အနီးမှ တောင်များနိမ့်ဆင်းခြင်းနှင့် မြေပြင်မြင့်တက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များ
အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ အောက်တိုဘာ ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီအထိ (၂၄ နာရီအတွင်း) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်း၊ ပဲခူးရိုးမတောင်ပေါ် ကျောက်မီးချောင်း ကြိုးဝိုင်း၊ ကရင်မျှောင်နေရာဒေသ၊ ဘန်းကုန်းဆည်အနီး၊ အမြင့်ပေ ၁ဝဝ ကျော်ခန့်ရှိသည့် တောင်တစ်ဝက်ခန့်(တောင်ထိပ်မှ အမြင့် ၂၅ ပေခန့်၊ အကျယ် တစ် ဧက ကျော်ခန့်အထိ တဖြည်းဖြည်း နိမ့်ကျသွားခဲ့ကြောင်း၊
၄င်းတောင်“ ပတ်ဝန်းကျင်မှ တောင်အချို့လည်း တဖြည်းဖြည်း နိမ့်ဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
တစ်ဖန် .. အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် – တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ငမင်ကျေးရွာ အရှေ့ဘက် ၁၂ မိုင်ခန့်အကွာ တောင်သူဦးမြစိန်၏ မြေကွက်အတွင်း အောက်တိုဘာ ၇ ရက် ည ၁၂ နာရီမှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက် နံနက် ၅ နာရီအတွင်း ယာမြေကွက်အတွင်းမှ အကျယ် ပေ ၁ဝဝ၊ အရှည်ပေ ၅ဝဝ၊ အမြင့် ပေ ၃ဝ ခန့် မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ထပ်မံသိရပါသည်။
ဤဖြစ်စဉ်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု အဖြစ် ယူဆနိုင်ပြီး ဒေအခြေအနေအား ပြန်လည်လေ့လာခဲ့ရာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် တောင်တွင်းကြီး ငလျှင် လှုပ်သည့် ငလျှင် ဗဟိုချက်မှ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၄ မိုင်ခန့်၊ တောင်ညိုမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁ဝ မိုင် ကျော်ခန့်၊ နေပြည်တော်လေဆိပ် အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၄ဝ ခန့်တွင် ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ပဲခူးရိုးမတောင်ပေါ်၊ ဝါးကတုတ်တမံ အနီး – အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကြွက်ဝမ်းဖြူများ အုပ်လိုက်ထွက်လာကာ နေရာပြောင်းကြသည်ဟု ယူဆရသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကို မှတ်မိကြမည်ထင်ပါသည်။ ထိုသို့သော ထူးဆန်းပြီး ဖြစ်နေကျမဟုတ်၊ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ မဟုတ်သည့် ဖြစ်စဉ်များကြောင့် ယခု ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်တွင် မိုးသည်းထန်ပြီး ရေကြီးခြင်းများဖြစ်ခဲ့ပါသလော?
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်အတွင်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လာနီညာ ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့် မိုးများပြီး ရေကြီးရသည်လော? စသည့် မေးခွန်းများအပြင် ….
အောက်ပါ ပဟေဠိမေးခွန်းများကို သိရှိနားလည်သူ – ပညာရှင်ကြီးများမှ သုံးသပ်ဖြေကြားပေးနိုင်ပါလျှင် …
ယခင် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်က တောင်တွင်းကြီး ငလျှင်လှုပ်ခဲ့ချိန်မတိုင်မီ၊ လှုပ်အပြီး ဤသို့သော ဖြစ်စဉ်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်း ရှိဖူးပါသလား?
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အခြားနေရာများတွင်လည်း ယခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ ရှိပါသလား?
ရှိခဲ့လျှင် ဘယ်အချိန်က ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသနည်း?
ယခု ဖြစ်စဉ်ကြောင့် မည်သည့် အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသနည်း?
ယခုဖြစ်စဉ်သည် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့၌ ကြာသပတေးဂြိုလ် ကမ္ဘာမြေအနီးရောက်လာမည့် အခြေအနေကြောင့်ဟု ယူဆပါသလား?
shweaeim si has written 103 post in this Website..
အတိတ်ကလဲ မေ့တတ်တော့ ခက်သားဗျာ..
နဲ့ ပိုနီးစပ်မလားလို့ ပါ..
အာစရိတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်လေးတွေပဲ စောင့်ဖတ်တော့မယ်..ထိပ်ထားကြီးရေ
မြေနိမ့်သွားတာတော့ဖတ်မိတယ်။မိုးများလို့မြေပျော့ပြီး တောင်ပြိုတယ်လို့ နားလည်မိတာ။
ကြွက်တွေက များသေားအားဖြင့် ၀ါးသုဉ်းရင် တောပြောင်းတတ်တယ်လို့ ဖိုးကျော့ဝတ္ထုတွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်။
အောက်မှာ.. ငလျှင်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့.. ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လင့်ခ်ပေးလိုက်တယ်..။
သာမန်အားဖြင့်တော့..ရေ/ မြေအပြောင်းအလည်းကြီးကြီးမားမားတွေဟာ.. ငလျှင်နဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တယ် ထင်မိတယ်..။
အသက်ဆုံးရှုံးတာတွေနည်းရအောင်.. အဲဒီနယ်တ၀ိုက်.. အဆောက်အဦးကြံ့ခိုင်မှုတွေပြန်စစ်… တပါတ်စာ ရေနဲ့..အစားအသောက် အမြဲထား..။
ပိုဖြစ်နိုင်ရင်.. အာဏာပိုင်တွေဦးစီးပြီး.. Earthquake Drills လုပ်သင့်တယ်ထင်တာပဲ..။
ပေ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ ရှာကြည့်တော့